Logitech G502 Lightspeed Review na Mmetụta Mbụ | Akụkọ akụrụngwa
Nyocha na mmetụta mbụ nke ọhụrụ Logitech G502 Lightspeed
Versiondị ọhụrụ nke Logitech G502 Lightspeed na-enye anyị usoro ọzọ na ihe anyị mabu mara banyere ụdị oke a na-ewu ewu nke na-atọ ndị ọrụ ụtọ iji ọtụtụ awa na-egwu egwu na PC ha. Na nke a na mgbe ngosi nke Logitech n'onwe ya mere isi obodo German karịrị otu izu gara aga, anyị nwere ohere ịnwale otu n'ime G502 Lightspeed ọhụrụ a.
Isi ihe omuma ya na mgbakwunye na ihe eji eme ka ihe di nma na-elekwasị anya na njikọta ikuku nke G502 Lightspeed ọhụrụ. Igwe a megharịrị ọhụrụ na-enye ohere nke igwu egwu obere egwuregwu na egwuregwu ndị dị ugbu a na-enweghị eriri, yabụ ọchịchọ nke nde ndị ọrụ nke G502 mbụ ebupụtara na 2014 ka a zutere na ụdị ọhụụ a. Mkpụrụ ọhụrụ ahụ nwere njirimara niile ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa kachasị dị ka onye bu ya ụzọ mere n’oge afọ ndị a.
1 Nhazi na isi nkọwa nke Logitech G502 Lightspeed ọhụrụ
2 Mmetụta uche na ike na-aga n'aka na nke a G502 Lightspeed
3 Wụnye òké ọhụrụ na PC dị mfe
4 Ọkwa dị oke elu maka ezigbo ndị egwuregwu
Nhazi na isi nkọwa nke Logitech G502 Lightspeed ọhụrụ
Mgbe anyị na-elekwasị anya na nhazi nke òké ọhụrụ a anyị na-achọta mmezi ndị dị mkpa n'ihe gbasara njikọta ikuku, anyị nwekwara ike ịhụ na ọ na-agbanwe n'ụzọ zuru oke na ụdị gamer niile ebe ọ bụ na nha, ọ bụ ezie obere, nwere ergonomics zuru oke. Isi n'ichepụta ihe bụ ABS na nke a na-eme ka ọ nnọọ ìhè ma na-agbakwunye nhọrọ iji tinye igwe n'ime n'ụzọ dị mfe iji mezie ihe ọkpụkpọ ahụ n'ụzọ zuru oke. Logitech achọghị ịgbanwe imewe karịa ụdị nke gara aga ma ọ bụrụ na mgbe ihe na-arụ ọrụ ọ ka mma ịghara imetụ ya aka.
Ndị a bụ isi nkọwa Usoro nke Logitech G502 ọhụrụ:
Ogo 132 x 75 x 40
Ibu 114g + 16g ekele maka 6 ọzọ
Dike ihe mmetụta 16K mere maka G502 a
Na-enweghị ọkụ ọ nwere ike ịdịru ihe dị ka awa 60 nke egwuregwu egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ
O doro anya na anyị nwere nhọrọ nhazi niile ya 11 configurable bọtịnụ n'otu ndokwa dị ka eriri wired. N'ezie, dịka anyị kwuru na mbụ, ha agbanweela atụmatụ ma ọ bụ nhọrọ nke oke oke, ihe ha mere bụ mmelite na ngwaike dị n'ime ya nke dị ezigbo mkpa.
Zụta Logitech G502 Lightspeed gị
Mmetụta uche na ike na-aga n'aka na nke a G502 Lightspeed
Ọ dịkwa oke mkpa ịnwe oke dị ike na nkọwapụta yana nke ahụ na-aza maka egwuregwu. N'okwu a, ihe kachasị mma banyere G502 Lightspeed a bụ na ị nwere ike ịhụ ọrụ siri ike ha mere site na ika ahụ ka ha ghara ịhapụ arụmọrụ na oke ahụ ma na mmemme ngosi ha gosipụtara ike ọrụ nyocha emere ka ike oriri na ike nke ngwaọrụ ahụ emetụtaghị onye ọkpụkpọ ahụ n’ime ogologo awa nke igwu egwu. Ọ bụ ya mere ihe omimi Hero 16K ọhụrụ a mere maka naanị G502 a ji nweta ihe oriri ahụ ruru oge 10 karịa ụmụ oke ndị ọzọ yiri ya.
Naanị ihe ọjọọ dị n'okwu a bụ na ụzọ isi kwụọ ụgwọ ọkụ G502 ọhụrụ a mgbe ị na-egwu egwu dịka ọ na-eme na ụdị G903 na G703, yanana Logitech Powerplay òké mpe mpe akwa.
Wụnye òké ọhụrụ na PC dị mfe
Ọ dị mfe ịwụnye oke a na kọmputa anyị ma anyị ga-ebudata ngwanrọ ngwaọrụ site na iji pendrive nke na-abịa na igbe ahụ, ma jikọọ eriri USB. Ugbu a, anyị nwere ike ibudata ngwanrọ na kọmputa gị ma nụ ụtọ ya nhọrọ nhazi egwuregwu dị iche iche nke G502 Lightspeed ọhụrụ a na-enye anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị nke gara aga nke wired a, ị ga-ahụ na ọ yiri ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu.
Ọ bụ sọftụwia dị mfe enyere iji kwado nhazi nke ọkpụkpọ ọ bụla, ọ na-enyekwa nhọrọ nke ịhazigharị macros site na sọftụwia a, nke na-eme ka usoro nrụnye dị mfe karị. Ọ bụghị ọrụ dị mgbagwoju anya ma ọlị Ma ọ bụrụ na ị nwere ngwa ngwa Logitech nke gị, ị ga - enweta sọftụwia nwụnye ngwa ngwa.
Ọkwa dị oke elu maka ezigbo ndị egwuregwu
N'okwu m, enwere m ike ikwu nke ahụ Adịghị m na "oke Counter Strike player" ọzọ ma n’ime oge ihe anyị ji egwu ọhụrụ Logitech G502 na PC rụọ ọmarịcha ọhụụ. Ọ na - eguzogide oke egwuregwu nke egwuregwu "ụlọ" na batrị abụghị nsogbu ma ọlị. Mgbe ahụ, anyị nwere nhọrọ iji gbanwee DPI ozugbo maka bọtịnụ ahụ ma nwee ekele maka nke a n'oge ụfọdụ nke egwuregwu ahụ, mana ihe tụrụ m n'anya kachasị bụ enweghị obi abụọ na ịdị nkọ nke oke ahụ na obere ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ tụfuru n'ihe gbasara ọsọ Ikuku wireless Nke a bụ ihe kachasị ịtụnanya na ọ bụ na igwe ikuku adịghị eju m anya na egwuregwu ruo ogologo oge, ee, nke a bụ otu n'ime oke oke na ọnụahịa ya na-egosi ya.
Anyị ga-enwe ike iji nwayọ na-egwu Fornite, Blizzard, Ogige 5 ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla n'ihi nkenke ya na ịbụ ikuku, ihe niile ọ na-eme bụ ihu ọma egwuregwu ahụ ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịnwekwu ahụmịhe na mmegharị. Ihe omume ngosi nke Logitech egwuregwu a họọrọ bụ nnukwu Njikọ nke Akụkọ Ifo, egwuregwu nke m nwere ike ịsị na m gwuru maka oge mbụ na ihe omume a na ndị fans gị gbaghara m mana m dị njọ. Na egwuregwu ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwale ugbu a nwayọ nwayọ, anyị na-amata nkenke dị mkpa nke G502 Lightspeed.
Anyị nwere ike ịkọwapụta ọtụtụ akụkụ nke oke ọhụụ a mana anyị ga-anọnyere ndị kachasị mkpa na echiche m. Nnukwu nnwere onwe nke òké Logitech, gbakwunyere na atụmatụ akụ na ụba na ezigbo ọrụ nke teknụzụ ikuku ya -eme ka anyị chere na anyị na-eji a Wired òké Yabụ na nke ahụ bụ nnukwu ihe gbasara Logitech G502 ọhụrụ a.
Anyị nwere ike iche na ịzụrụ otu n'ime oke oke ndị a nwere ike ịpụta nhụfu nke AIM anyị ma ọ bụ ọbụlagodi na ị na-akwụ ụgwọ mgbe niile, na-efunahụ awa nke egwuregwu na ọ bụghị eziokwu. Teknụzụ nke etinyere na oke a na-eme ka anyị chefuo ihe niile na naanị ka anyị nwee ọatụ ọtụtụ ihe ọ na-enye na nkọwa pụrụ iche kedu ihe ọ bụ Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta òké ikuku ugbu a iji nọrọ ọtụtụ awa na awa na-egwu egwuregwu kachasị amasị gị, tụlee ụdị Logitech ọhụrụ a ebe anyị ji n'aka na ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Nzube na arụmọrụ
Ọ bụ ikuku ma ị gaghị ida nzube na egwuregwu
Onu ogugu onu ahia
Nchaji ndakọrịta ndakọrịta
Logitech G502 Ìhè
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Nyocha na mmetụta mbụ nke ọhụrụ Logitech G502 Lightspeed
Achọpụtala data nke onwe nke ọtụtụ puku ndị na - eme ihe ike na Instagram
Google na-ahapụ Huawei na-enweghị gam akporo, mana ịnweta Storelọ Ahịa Play maka ugbu a